Fanafihana teny Itaosy Tafaporitsaka ireo jiolahy nanafika “Shop Airtel”
Nisy nanafika ny “Shop Airtel” iray teny Itaosy Cité omaly takariva tokony ho tamin’ny 5 ora.
Taraiky tao anatiny anefa ireo mpangalatra, ary nanao takalon’aina ny ramatoa 50 taona tao anatiny tao. Nanao bemidina ny zandary sy ny polisy, rehefa nisy ny fampandrenesana. Voahodidina ny tanàna. Nifamahofaho tanteraka ny resaka avy eo, ka raha ny vaovao farany voaray omaly hariva, dia tafaporitsaka ireo jiolahy, ary lasa ny vola 5 tapitrisa ariary sy ny finday maromaro.
Tsy nokasihan’izy ireo kosa ilay ramatoa lehibe. Roalahy ka nitondra basy ny iray, ary antsy lava kosa ny iray no nanafika raha ny fanazavana. Ny 3 febroary no efa nisy fanafihana tahaka izao teny Ambohidahy Ankadindramamy, ka jiolahy roa nitondra basy sy antsy tahaka ny teny Itaosy no nanao ny asa ratsy, ka tsy hay na ireo ihany na nanao ity asa ratsy omaly ity na hafa indray. Nirefodrefotra vao maraina ny basy tamin’izany satria teo am-pamohana ny toeram-pivarotana no notapohan’ireo jiolahy roa tsy nisaron-tava. Nitifitra ka nahavoa ilay nokendrena ary lasa ny vola iray sakaosy. Mbola nanapoaka basy in-droa teo am-pitsoahana, ary nisara-dalana, ka ilay nitondra basy no nitondra ny vola.
Vao ny sabotsy lasa teo ihany koa no nisiana fanafihana tany Ambositra, ka voatifitra sy voatsatoka antsy ireo mpivady lehibe tao an-trano. Tena tsy milamina ny tany, ary sesilany ny fanafihana toerana misy fikirakirana vola tahaka ireny tato ho ato, izay mila andraisana fepetra hentitra. Raha ireo tranga roa teto Antananarivo, dia azo eritreretina ho misy ifandraisany. Tsy ny fanafihana toerana tahaka ireny ihany fa tena tsy milamina ny tany na ambanivohitra na an-drenivohitra.